ဇူလိုင်၉ရက်တွင် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မည် | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုးမခအထောက်တော် (စင်ကာပူ)၊ ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၄
အင်ဒိုနီးရှားသည် လူဦးရေသန်းပေါင်း ၂၄၀ကျော်၊ ကျွန်းပေါင်း တစ်သောင်းခုနှစ်ထောင်ကျော်၊ မဲပေးနိုင်သူ ၇၅သန်း မှ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
အရပ်သားအင်ဂျင်နီယာဘဝမှာ ဂျာကာတာမြို့ဝန်သို့ တက်လှမ်းလာခဲ့သူ ဂျိုကိုဝီ ဟုခေါ်ခံရသူနှင့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဘဝမှ အစိုးရဝန်ကြီး၊ ရာထူးကြီးများရရှိလာသူ ပရာဗိုမို တို့ပြိုင်ကြမည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်၊ အသွင်မတူသူ ၂ဦး၊ တစ်ဦးကို ပြည်သူများက သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရပေတော့မည်။ လက်ရှိသမ္မတ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ယိုဒိုယူနိုသည် ၅နှစ် ၂ကြိမ်သမ္မတရွေးခံရပြီးသည့်နောက်၊ ထပ်မံအရွေးမခံရတော့ပေ။
၁၉၉၈ အင်ဒိုနီးရှား အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း၊ ဆူဟာတို မဖြစ်မနေ၊ အနားယူသွားပြီးနောက် သမ္မတ၄ဆက် တာဝန်ယူခဲ့ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလည်း နှစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်တွင် စစ်တပ်ပါဝင်မှုကို လျှော့ချခဲ့သည်။ သမ္မတကိုလည်း တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်သော စနစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
စစ်တပ်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းများ နိုင်ငံရေးတွင် စိုးမိုးနေဆဲဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယခု ၁၀နှစ် သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော SBY ဟု ခေါ်ကြသော သမ္မတယိုဒိုယိုနိုသည် အဂတိလိုက်စားမှုကို တိုက်မည်ဟု လက်သီးလက်မောင်းတန်းကာ သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။ လက်ရှိအာဏာနှင့်ရာထူး ရရှိထားသူများ၏ ဖိအားပေးမှုကို သမ္မတကိုယ်တိုင် တောင့်မခံနိုင်သောကြောင့်၊ အဂတိလိုက်စားမှုများကို ပြောသလို၊ လုပ်မရနိုင်ဖြစ်နေသည်။
အင်ဒိုနီးရှားအချမ်းသာဆုံး Bakris ဆိုသူ သူဌေးကြီးကို ဂိုကာပါတီက ဥက္ကဌခန့်ထားပြီး၊ နာမည်ပျက်များထွက်နေသည့်ကြားက သူ့ကိုပင် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ ညီညွတ်ရေးဟု ဆိုကာ၊ သူ့ကိုပင် ရာထူးကြီးကို တိုးပေးထားရသည်။ နာမည်ကောင်းရပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုလားသော ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Sri Mulyani ကို ရာထူးမှဖယ်ရှားခံရသည်။
PR ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင့်သုံးသောကြောင့် သမ္မတ၏ ပါတီလည်း လွှတ်တော်တွင် မဲအများစုမရှိသဖြင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖြစ် အုပ်ချုပ်နေရသည်။ ထို့ကြောင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးမှာ ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။ ခြုံကြည့်လျှင် သမ္မတ ယိုဒိုရိုနိုအစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီလမ်းကို အတိုင်တာတစ်ခုအထိ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
အမြင်ချင်းမတူသော သမ္မတလောင်း ၂ဦးမှာ တီဗွီစကားစစ်ထိုးခြင်း ၅ကြိမ်လုပ်ပြီးသွားပြီ ဖြစ်သည်။
မဲစစ်တမ်းကောက်မှုများတွင် ယခင်က ဂျိုကိုဝီ အပြက်အသာရရှိသော်လည်း၊ ယခုအခါ ဂျိုကိုဝီ နှာတဖျားအသာဖြင့်သာ ဦးဆောင်နေသည်။ မည်သူအနိုင်ရမည် မသေချာတော့။ မဲဝယ် ရွေးကောက်ပွဲမသမာမှုများဖြင့် နည်းပါးမည်ဟု ဆိုသော်လည်း၊ စစ်တပ်အရာရှိများက ပရာဗိုမိုကို မဲထည့်ရန် ဆွယ်နေကြသဖြင့် သမ္ပတကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရေးလုပ်လိုပါက စစ်တပ်မှထွက်ပြီးလုပ်ရန် သတိပေးရသည်။
ဂျိုကိုဝီ မှာ ပြည်သူလူထုကြားသို့ ဟိတ်ဟန်မရှိ ဝင်ထွက်သွားလာ၊ အကြံယူပြီး အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ ပရာဗိုမို မှာ ပြည်သူလူထုကို လမ်းညွှန်ပြသအုပ်ချုပ်သော စနစ်ဖြစ်သည်။ အဂတိလိုက်စားမှုများဖြင့် အောက်ခြေအဆင့်မှ၊ ထိပ်တန်းရာထူးများအထိ အဂတိမကင်းနိုင်အောင် ဖြစ်နေသောကြောင့် နောက်အစိုးရတက်လာလျှင် သိသာသော အပြောင်းအလဲများကို ပြည်သူများက မျှော်လင့်ကြသည်။ အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကောမရှင် (KPK) လည်း သမ္မတမှ အကာကွယ်မပေးထားသဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် မဆောင်ရွက်နိုင်ဖြစ်နေသည်။
ထိုနှစ်ဦးကို ပြည်သူများက တိုက်ရိုက်ရွေးချယ် ကြမည်။ အင်ဒိုနီးရှား အပြောင်းလဲသည် မြန်မာပြည်အတွက် စံထားရသဖြင့်၊ မြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ပါသည်။
2 Responses to ဇူလိုင်၉ရက်တွင် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မည်
General Elections Commission (KPU) on July 8, 2014 at 9:14 am
Wealth announced by election commission (here – converted to US$). Prabowo Subianto owner of 20 business companies which worth US $147.7 millions. While Jokowi wealth is US$ 1.6 million. Indonesia politician has to declare their wealth.
Winner will most likely be known tomorrow evening. Election survey LSI poll ,Jokowi lead 46-42 per cent. But late surge – retired general Probowo could win by 53-47 per cent.
PDI-I Party on July 9, 2014 at 2:58 pm
JOKO WIDODO (ဂျိုကိုဝီ) ဝိဒိုဒို အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဟု ပါတီ PDI-P ကကြေညာ။ (Photo: Jokowi and party leader Ms Magawaddi , former president) 52.61% vs 47.39% still vote counting…
အင်ဂျင်နီယာ၊ လုပ်ငန်းရှင်၊ ဂျာကာတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုး-လဘ်စားမှုကင်းသူ၊ လာဘ်စားသူများနဲ့လည်း အတူအလုပ်လုပ်နိုသူ၊ ပြည်သူကြားထဲဆင်းပြီး လူထုနိုင်ငံရေးသမား အင်ဒိုနီးရှားလူထုက သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ရှုံးသွားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ပရာဗိုဝိုက ၄၇%တောင် ရတယ်ဆိုတော့၊ စစ်အာဏာရှင်များကို ထောက်ခံသူ တော်တော်များတယ်။ တောရွာများက ပေးဆိုကြောက်လို့ပေးရတာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။